General Description Magnetic Filter rakagadzirirwa rinorema basa, hombe vhoriyamu mvura uye Semi-mvura mutsetse chokubuda enyika. Inopa rinobva kudzivirira mvura mitsetse uye kugadzira michina. Rinoshandiswa chaizvo filtration yakaisvonaka ferrous tsvina kuwanikwa lubricants, coolants, hydraulic anonhuwirira, slurries mu engineering, wakashamwaridzana mishonga uye nemakemikari maindasitiri. The Magnetic Filter iri nyore bvisika kubva Stainless simbi ruvazhe kupfurikidza kusunungura mashoma nokukurumidza kusunungurwa fasteners. For t ...
Magnetic Filter rakagadzirirwa rinorema basa, hombe vhoriyamu mvura uye Semi-mvura mutsetse chokubuda enyika. Inopa rinobva kudzivirira mvura mitsetse uye kugadzira michina. Rinoshandiswa chaizvo filtration pamusoro add ine ferrous tsvina kuwanikwa lubricants, coolants, hydraulic anonhuwirira, slurries mu engineering, wakashamwaridzana mishonga uye nemakemikari maindasitiri.
Strong zvechigarire rinobva sepombi wakaiswa pana urongwa. Kana chinhu chine simbi / simbi zvinhu ichipfuura kuumbwa, nedare / simbi zvinhu zvichaita vachabatana padenga parusvingo sepombi. Somugumisiro, wako midziyo uye zvivako vachava vakachengeteka uye kuridza, uye zvinhu zvako Uchamiswa rinodyiwa.
Magnetic filters anogona kushandisa mishonga, utsanana, Whitehead Textile, michina uye zvokudya. The filer achava kukwezva simbi / simbi zvinhu kubva mvura, pakati mbeu kana Nezvakakuyiwa.
Size, urefu uye chimiro
Size uye kureba rinobva sepombi, uye Maumbirwe kuumbwa achizosiyana panguva yenyu chikumbiro.
Open uye Download chigadzirwa katarogu kuti rinobva firita